Niaro ny solosainao ve ianao tamin'ny botnet? & Ndash; Raha tsia, araho ny torohevitra momba ny seminera
Niaro ny solosainao ve ianao tamin'ny botnet? - Raha tsia, araho ny torohevitra momba ny seminera
Nilaza i Nik Chaykovskiy, mpitantana ny Customer Success Semalt , fa ny botnets dia ahitana tamba-jotra "solosaina zombies", izay matetika no ateraky ny malware sy ny fanaraha-maso ataon'ny mpampiantrano iray. Amin'ireny tranga ireny, ny mpisoloky an-tserasera dia manangana baiko toy ny fandefasana spam na manafika ordinatera hafa. Ny bot dia sariohatra malaza izay afaka mandefa sy mandray vaovao avy amin'ny mpizara Command and Control (C & C). Ity robot ity dia azo ampiasaina amin'ny olona manana fikasana ratsy hamelezana ny voka-dratsiny. Taloha, ireo botsika dia tafiditra amin'ny heloka bevava maro toy ny fanafihana DDoS. Ireo olona manana tranokala ara-barotra dia mahazatra amin'ny karazana fotsy hoditra fotsy. Ohatra, Google, Yahoo ary Bing dia mampiasa botso toy ny fitifirana tranonkala hiditra ao amin'ny tranokala ary haka ireo fampahalalana vohikala manan-danja.
Inona no botnetna
Ny botina tokana dia mamaritra ny singa ampiasain'ny botnet. Ny bot dia programa tsotra izay mamela azy io hamoaka baiko avy amin'ny mpanamboatra remote. Ny bot dia tsy maintsy mahita ny fomba amam-panao azy amin'ny fomba voafaritra amin'ny ordinatera. Avy eto, ny bot dia mila mifandray amin'ny server sy remote Control. Ilay mpampihorohoro dia mampiasa programa mpanjifa mba hamelezana ny fanafihana an'ity tambatotra botnets ity.
Raha vao voakilasy ny app, ny mainty hoditra mainty hoditra dia manaparitaka izany amin'ireo tra-boina. Ny habetsaky botnet mahery amin'ny mpampiasa maherin'ny 20,000. Mampiasa ny tricks ireo mpanafika mba hametraka ny olona hametraka ny malware amin'ny solosainy. Ohatra, mety manapa-kevitra ny handefa mailaka mailaka amin'ny mpanjifany ny olona. Ireo mailaka ireo dia mety ahitana rohy mampidi-doza sy fisintonana. Ny hafa dia mety mandefa ny atiny misy malware sy tranaona..Ireo fanafihana ireo dia mifantoka amin'ny endriky ny solosaina, izay ilay niharan'ny vulnerable.
Tsy maintsy mijanona ao anatin'ny rafitra fanaraha-maso iombonana ireo bots ireo bots ireo. Ireo bôotika dia mifampitondra manaraka ny fomba toy izao:
Miara-mitahiry izany. Ireo bôot ireo dia mifandray sy mandefa ny baiko tsirairay. Na izany aza, mbola afaka manara-maso ny fifandraisana amin'ny ankapobeny ao anatin'ny tetikasa ny bot.
C & C amin'ny botnet. Ity dia fomba fanabeazana avo lenta. Ilay mpanafika dia mandefa baiko mivantana any amin'ny tambajotra amin'ny mpizara C & C. Any no misy ny fanafihana maro.
Ny fomba fiasa Hybrid. Ity fomba fiasa ity dia mampifandray ireo teknika etsy ambony.
Ny olona dia afaka manatanteraka fanafihana botnet maro miaraka amin'ny fanampian'ny tamba-bot. Ohatra, mpampiasa sasany mety hanomboka mandefa mailaka amin'ny spam. Tao anatin'ny lasa vao haingana, ny heloka bevava toy ny fangalarana ny angona dia vokatry ny asan'ny botnets. Ohatra, nanafika ireo milina hanakorontana ny toetry ny fiarovan'ny aterineto. Ireo mpampiasa izay mitahiry ireo angon-drakitra amin'ny ordinatera dia mety ho very daholo izany amin'ny hackers. Ohatra, ny fangalarana karatra amin'ny carte de crédit, ny fangalarana ara-bola ary ny fahaverezan'ny fidirana fidirana
Ilaina ny mianatra ny fomba hanakanana ny fanafihana botnet. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, botnets dia manomboka amin'ny programa malware malaza izay miditra amin'ny ordinatera iray tsy misy ny fahalalany. Amin'ireo tranga rehetra ireo, ny fanentanana dia afaka manatsara ny toetry ny cybercurity. Ny governemanta dia afaka mamela ny olom-pirenena ho voaro amin'ny cyber-mpanao heloka bevava Source .